Kaqaybgalkaaga xogururintan waa muhiim. Jawaabahaagu waxay noo saamixi doonaan qeexidda wixii danayn mudnaan leh u ah ammaanka iyo nabadgelyada Seattle. Natiijooyinka xogururinta waxa loo tebin doonaa Waaxda Booliiska Seattle.
Loogama baahna macluumaad aqoonsi kaqaybgalka xogururinta oo jawaabahaagu waa asturan yihiin. Waxa lagu qiyaasay in ay qaadan doonto ku-dhawaad 20 daqiiqo si loo dhammaystiro. Sii wadida horida, waxaad ogaaneysaa inaad tahay 18 sanno jir ama weyn, ku nool iyo/ama ka shaqeeyo iyo/ama shaqada caasimada Seattle, oo ogolaaday inuu ka qeybqaato ee Xog aruurinta Badbaadada Bulshada Seattle.
Waxaan oggolahay in aan sameeyo xogururinta
Ma oggoli in aan sameeyo xogururinta
تحت رعاية Qualtrics